Raha toa moa ka ... volivolana : comments » What if ...
Tuesday, May 15, 2012 - 22:57:29
dia ahoana izany ny fitsipika atao sa hoe ze teny tonga any antsaina kanefa mbola tsisy dikany dia tonga dia raiketina wazy ve??
sa hoe… manao algorithm tsotsotra manakambana alphabet… dia refa mi-sonner gasigasy dia efa azo raisina @ ze situation hita fa ilana volana :)
Wednesday, May 16, 2012 - 06:44:09
Sady mifameno ihany koa ireo valin-teny ireo. Tsy dia misy hoe fitsipika nefa tokony hi-sonner gasigasy, mora tadidy, mora raisina ary mora ampifandraisina amin’ilay heviny ilay voambolana foronina. Tsy haiko aloha ianao fa izaho vao nandre voalohany ilay hoe “makafoka” dia azoko sahady ny dikany na dia tsy mbola nohazavaina tamiko tsara aza e, ny fanenon’ilay hoe makafoka fotsiny dia efa milaza zavatra. Izay moa izany no idealy soa kanefa tsy votery hahita voambolana mora raisina toy izay foana, fa io arakaraky ny faneken’ny olona sy fampiasan’ny olona azy ihany no hahavelona na hahafaty an’io.
Ny hoezahina hialàna amin’ity tetikasa ity fotsiny dia ny hoe zavatra na trangan-javatra iray kanefa hisy volana 5 na mihoatra no hifaninana hampiasaina aminy. Amiko tsy dia harenan’ny fiteny iray ny manana voambolana maromaro milaza zavatra tokana, fa ny fisian’ny voambolana manokana milaza zavatra tokana izay ho sarotra adika amin’ny fiteny vahiny, izany no atao hoe fiteny manankarena amiko.